Global Voices teny Malagasy » Anne Hemeda: Ny lesoko momba ny fahamendrehana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Jolay 2019 7:59 GMT 1	 · Mpanoratra Anne Hemeda Nandika Liva Andriamanantena
Efa mpamaky mpankafy efa nandritra ny taona maro aho raha nanomboka ho mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny Global Voices. Lahatsolatra tselatra nosoratan'i Rami “Lesona momba ny fahamendrehana avy any Syria ” ny lahatsoratra nadikako voalohany.
Miresaka momba an'i Syria: Misaotra betsaka an'i Marcell ! Nandona ny foko ny teninao. Faly tokoa aho nandika ny taratasinao ho amin'ny teny Alemà. Tiako ny vazivazinao sy ny famariparitanao miavaka sy tsotra dia tsotra ary hatramin'izao dia mbola mandika ny taratasinao anaty tsikitsiky eny amin'ny endriko sy ny ranomasoko hatrany aho.
Niaraka tamin'ny fandikana voalohany ny lahatsoratra “Lesona momba ny fahamendrehan'ny olombelona ” no nanombohako ny lesona momba ny fahamendrehana tato amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices, izay tonga ary mbola mitoetra ho iray amin'ireo traikefa fianarana nahafa-po indrindra ho ahy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/13/141325/
 Lesona momba ny fahamendrehana avy any Syria: https://globalvoicesonline.org/2013/08/23/a-lesson-on-dignity-from-syria/
 Lesona momba ny fahamendrehan'ny olombelona: https://de.globalvoicesonline.org/?p=16403